Ezona ncwadi zembali zibalaseleyo
Indlu engunaphakade, nguYuri Slezkine
Ingoma ka-Def ene-Dos ngokuzibuza ukuba ngubani na oguqulele iintetho zikaLenin. Kufuneka ukuba kubekho umntu owayenetyala kuloo ntlekele yayikukufakwa kobukomanisi. Kwaye ewe, ngaphaya kweparody yomculo into engahambanga kakuhle, ayilunganga kwaphela. Okokuqala kuba ndiyazi ...
M. Indoda yesibonelelo, ngu-Antonio Scurati
Amava abonisa ukuba ulungiselelo lulindeleke kwelona xesha limnyama ehlabathini. Njengemvula yesaqhwithi esikhulu, kanye phambi kokuba umbane ubethe. Akukho nto ilunge ngaphezu kwepulism elungileyo enokuzibonakalisa njengentshatsheli yekamva eliqaqambileyo ukuze olu kholo lungaqhelekanga luphele ...
AmaLadies Killer: Abasetyhini beLethal kwiMbali, nguTori Telfer
Ukubulala akukho sini akuthandabuzeki. U-Oswald, umbulali kunye nencwadi yakhe ethi The Catcher in the Rye under his arm, okanye York Ripper okanye "The Wolf of Moscow" ngewafikelela kwiintsuku zethu. Kodwa ewe, kukwakho nabasetyhini abathanda olona lwaphulo-mthetho lukhohlisayo ...
Iincwadi ezi-3 ezilungileyo zikaHenry Kamen
Kukho iintsuku ezingaqhelekanga zokusebenza njenge-Hispanicist eyaziwayo. Kwaye ngaphandle koku, abafana abanjengoPaul Preston, u-Ian Gibson okanye uHenry Kamen bayanyanzelisa ukuba baqhubeke nokugxila kwibali, ukuba belilenzelwe ezinye ukuthanda ukuthanda ubuxoki, intsomi emnyama okanye inzala ye-ethnocentric, inokugqibela iphazamiseke ngokupheleleyo. ...
Ukulingwa kweCaudillo, nguJuan Eslava Galán
Ukujonga phakathi kweenoveli ezinkulu zembali kunye nemisebenzi efundisayo, uJuan Eslava Galán uhlala evusa umdla omkhulu phakathi kwabafundi, umdla wombhali onamava kwincwadi ebhalwe ngokubanzi njengoko ubalaseleyo. Ngesi sihlandlo, u-Eslava Galán usisondeza kumfanekiso owaziwayo. Lowo uhamba noozwilakhe ababini ...
Iincwadi ezi-3 eziphezulu zikaPaul Preston
Njengoko kuhlala kusitsho phakathi kokuhlekisayo kunye nokwenyani, ecaleni kwesichazi magama intsingiselo ye-Hispanism kufuneka ibonakale ebusweni bukaPaul Preston. Kungenxa yokuba, njengombhali-mbali (kwaye ngokunyanisekileyo ngenzondelelo kule nkalo ye-Hispanic), lo mbhali waseNgilani uye waphanda kwaye waqokelela wahambisa ...